विभिन्न गाउँ डुबानमाः पीडितलाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार | himalayakhabar.com
साउन २८ गते | 12th Aug 2017, Saturday | २०७४ श्रावण २८, शनिबार १६:०१
खजुरा (बाँके)- लगातारको वर्षाले जिल्लाका विभिन्न स्थान डुबानमा परेको छ ।
स्थानीय प्रशासनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गए रातिदेखि नै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना परिचालन गरेको निमित्त प्रजिअ कृष्ण खड्काले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाका बाढी प्रभावितलाई उद्धारका लागि हेलिकप्टरको प्रयोग गरिएको छ । सुर्खेतमा रहेको हेलिकप्टर अहिले नेपालगञ्ज ल्याएर बाँकेको बैजापुरका नागरिकलाई उद्धार गर्न लागिएको छ । बाढीले बैजापुर, फत्तेपुर र होलियामा सबैभन्दा बढी प्रभावित बनाएको छ । त्यहाँका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानतर्फ लग्ने प्रयास भइरहेको छ ।
यसैबीच पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बाँकेको खासकुश्मामा मुख्य राजमार्गमा तीन रुख ढलेका छन् । अहिले ती रुख हटाउने काम भइरहेको बाँकेका प्रहरी प्रमुख टेकबहादुर तामाङले बताउनुभयो । राप्ती नदीको तह बढेर अहिले ८.५८ मि पुगेर उच्च जोखिममा छ । राप्ती नदीको सतह पाँच मि सामान्य मानिन्छ । रासस
अमेरिकाको ड्यालसमा डा. केसीको अभियानमा समर्थन
२०७४ श्रावण २८, शनिबार ११:४७
हिमालयखवर संवाददाता टेक्सस (अमेरिका) – मेडिकल शिक्षामा सुधारको माग राख्दै अनशनरत डा. गोबिन्द केसीलाई अमेरिकाका रहेका नेपाली समुदायले समर्थन जनाएका छन् ...
अगष्ट १३ माँ लसएन्जल्समा हरितालिका तिज भव्य रूपमा मनाउदै
२०७४ श्रावण २८, शनिबार १६:०५